Tag: azo zaraina | Martech Zone
Tag: azo zaraina
Tsy maharitra ny torohevitra tsara ary koa ny fampahalalana amin'ity sary ity. Diana Adams avy amin'ny BitRebels dia nametraka lisitra 10 Fomba hanatsarana ny fijerena pejy ao amin'ny hafatrao ary NowSourcing dia namadika azy io ho sary mahafinaritra. Mahitsy ny torohevitra: mandefasa atiny tsara matetika (eny, fantatro fa efa nanao fety izahay nandritra ny fialantsasatra). Ataovy azo zaraina ny hafatrao - tianay ny fizarana ara-tsosialy mora ho an'ny WordPress! Mampiasà fitaovana ho an'ny famoronana votoaty - manana fanairana fanairana izahay
Vao tsy ela akory izay no nanoratako ny fahaizan'i Angie's List nanintona bebe kokoa ny fisian'izy ireo ara-tsosialy miverina amin'ireo lahatsoratra nosoratany tao amin'ny tranonkalany. Ireo olona ao amin'ny Skyword dia namintina ny fomba famolavolana paikadin'ny votoaty izay miasa amin'ny alàlan'ny fiantohana ny atiny manana singa manan-danja 3. Ny atiny dia tokony hotadiavina, azo zakaina ary azo zaraina.